အသက်သုံးနှစ်အရွယ်မှာ ကလေးတွေ ဘယ်အရာကို သင်ယူကြသလဲ? - Chit MayMay
Home Child Teaching အသက်သုံးနှစ်အရွယ်မှာ ကလေးတွေ ဘယ်အရာကို သင်ယူကြသလဲ?
သုံးနှစ်အရွယ်တွေဟာ စိတ်ခံစားမှုတွေ အရမ်းလျင်မြန်ပြီး ခံစားချက်တွေ ပြင်းပြကြပါတယ်။ သူတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အရာအားလုံးကို သူတို့ဘယ်လို သဘောပေါက်သလဲဆိုတာ မြင်ရတာက အံ့သြစရာပါပဲ။
အသက်သုံးနှစ်အရွယ်မှာ ကလေးတွေ ဘယ်အရာကို သင်ယူကြသလဲ?- လူတိုင်းက သူ့အရှိန်အဟုန်နဲ့သူ ရှိကြတယ်ဆိုတာ သတိရပါ
ဒီအဆင့်မှာ အရေးအကြီးဆုံးမှတ်တိုင်တချို့အကြောင်း ပြောပြမှာဆိုပေမယ့် ကလေးတိုင်းက မတူကြဘူးဆိုတာ သတိရပါ။ ကလေးငယ်တွေမှာ မတူညီတဲ့ သင်ယူမှုစည်းမျဉ်းတွေရှိကြပြီး အဲဒီအတွက် သူတို့ကို လေးစားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သင်ယူမှုကို အလျင်စလို မဖြစ်သင့်ပေမယ့် ပိုပြီးတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးတတ်လာအောင် သူတို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးပါ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါ။ သူတို့ကို လမ်းညွှန်ပါ။ မြန်မြန်တိုးတတ်လာဖို့အတွက် သူတို့ကို ဘယ်တော့မှ မလွှမ်းမိုးပါနဲ့။
မေမေတို့ရဲ့ သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးကို အသက်အရွယ်တူ ကလေးတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ မြန်မြန်တိုးတတ်လာတဲ့ကလေးတွေရှိသလို သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်သင်ယူခြင်းမှာ အခက်အခဲပိုရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုရပ်တန့်နေဆဲ ကလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သို့သော် သူတို့အားလုံးကို လိုအပ်တဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေပေးမယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့သင်ယူခြင်းက တိုးတတ်လာနိုင်ပါတယ်။
သုံးနှစ်သားတွေအပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကလေးတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုနဲ့ ဒီချိုမြိန်တဲ့အဆင့်မှာ သူတို့သင်ယူလေ့လာသမျှဟာ သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှရရှိတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေ၊ အိမ်မှာ၊ မူကြိုမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက လွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ ကျွန်မတို့ သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးတွေ သင်ယူနိုင်တဲ့အရာတချို့ကို ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။ သို့သော် ဒါက ယေဘုယျလမ်းညွှန်တစ်ခုသာ ဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။ မေမေတို့ကလေးက ဒါကို သင်ယူပြီးပြီ (သို့) သင်ယူနေဆဲဖြစ်ရင်လည်း အဆင်ပြပါတယ်။
အသက် ၃နှစ်အရွယ်မှာ ကလေးတွေ သင်ယူတဲ့အရာများ
ဒီအသက်အရွယ်ရှိ ကလေးတွေအားလုံးက စူးစမ်းရှာဖွေသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့အာရုံခံစားမှုက သူတို့ရဲ့ဆရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိဖို့၊ သူတို့ရဲ့ အသိအာရုံမှ ပေးတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကို စုပ်ယူဖို့ အာရုံခံစားမှုအားလုံးကို အပြည့်အဝအသုံးချကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပြီး ဖန်တီးမှုကို ပိုစဉ်းစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ သူတို့အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့ ရိုးရိုးပြဿနာတွေကိုသာ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးတွေ ဘယ်အရာကို သင်ယူကြသလဲ? “ဒါ…ငါ့ဟာ”စတဲ့ စကားလုံးတွေ
“နိုး…ဒါ ငါ့ပစ္စည်း၊ ငါ့ဟာ” စတဲ့စကားလုံးတွေက သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစကားလုံးအချို့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မေမေတို့ ကလေးလေးဟာ ပိုပြီးအမှီအခိုကင်းလာတာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ ဒီအသက်အရွယ်မှာ သဘာဝနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗဟိုပြုခြင်း(self-centeredness) နှင့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှု (selfishness ) ကိုပြသခြင်းတို့ လုပ်လာပါလိမ့်မယ်။
သူတို့က မမျှဝေချင်ဘူးဆိုရင် ဒေါသမထွက်ပါနဲ့၊ ကျွန်မတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ၊ဒီအသက်အရွယ်မှာ ဒါက သဘာဝဖြစ်ပြီး ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသူတွေကို စာနာတတ်ဖို့နှင့် ရက်ရောဖို့သာ လမ်းညွှန်ပေးပါ။
အသက်သုံးနှစ်အရွယ်မှာ ဝေါဟာရတွေ ပိုကြွယ်လာပါလိမ့်မယ်၊ သူတို့ဟာ ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ ဝါကျတွေကို ပြောဆိုနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရာတွေက သူတို့အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ပြီး အဲဒီအကြောင်းကို အပြည့်အဝ စူးစမ်းလေ့လာပြီး ပြောချင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ သီချင်းတွေ၊ ကဗျာအတိုလေးတွေကို မှတ်မိပြီး စကားလုံးအများကြီးနဲ့ conversations တွေကို နားလည်နိုင်စွမ်းလည်း ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ မေမေတို့က ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြရင် စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်နဲ့ အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
သုံးနှစ်အရွယ်မှာ ကလေးတွေ ဘယ်အရာကို သင်ယူကြသလဲ? သူတို့က အများကြီးစွမ်းနိုင်ပါတယ်
သူတို့ကိုယ်တိုင် ပိုပိုပြီး လုပ်လာနိုင်စွမ်း ရှိတာကို မေမေတို့ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ယခင်က ဒီလုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက် မေမေတို့အကူအညီကို သူတို့လိုအပ်ခဲ့ပေမယ့် သုံးနှစ်အရွယ်မှာ သူတို့ဘာသာ သူတို့လုပ်ခြင်းကို နှစ်သက်လာကြပါပြီ။
ကစားစရာတွေကို သူတို့အခန်းထဲကနေ ယူတတ်လာပါတယ်။
သူတို့အသက်အရွယ်အလိုက် သင့်တော်တဲ့ ရိုးရိုးပဟေဠိလေးတွေ ပြုလုပ်တတ်လာပါတယ်။
သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်က အကြောင်းအရာတွေနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ပိုနားလည်လာပါတယ်။
အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းကို သုံးလာပါတယ်။
တူညီမှုတွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို သတိပြုမိလာပါတယ်။
နံပါတ် ၁ကနေ ၁၀ထိကို သိနားလည်လာပါတယ်။
gross motor skills နှင့် Fine motor skills ပိုကျွမ်းလာပါတယ်။
အခြားသူတွေနဲ့ ကစားခြင်းကနေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို အဖြေရှာလာပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီကနေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှု လိုအပ်လာပါတယ်။
symbolic ကစားရတာကို ပျော်လာပါတယ်။
ပုံဆွဲတာကို ပိုသဘောကျလာပါမယ်၊ ပိုပြီး နားလည်နိုင်လာပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်သူငယ်ချင်းတွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
မေမေတို့ မြင်တဲ့အတိုင်း သုံးနှစ်သားလေးဟာ ဆက်ပြီး သင်ယူလိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ မှော်ဆန်မှုတွေနှင့် အံ့သြစရာတွေ ပြည့်နေတဲ့ သေတ္တာတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတိုင်းက မတူညီကြပါဘူး။ မေမေတို့ကလေးက ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်လာမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို အလျင်စလို တိုက်တွန်းတာမျိုး၊ သူတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရစည်းချက်ကို မလေးစားတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သံသယရှိရင် ကလေးအထူးကုတွေနဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Previous articleကလေးငယ်တွေရဲ့ သင်ယူခြင်းကို ထိန်းညှိပေးနေသော စိတ်ခံစားမှုနယ်ပယ် (၅) ချက်
Next articleသားသားမီးမီးတွေ ငိုတဲ့အခါ မိခင်ရဲ့ဦးနှောက်က ဘာဖြစ်လာသလဲ?
မေမေတို့ကလေးကို စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်အောင် သင်ပေးဖို့ နည်းလမ်း (၆)ခု
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်းအလေ့အထကို အားပေးရင်း ကလေးတွေနှင့်အတူ ဘယ်လိုချက်ပြုတ်ကြမလဲ?
ကလေးဘဝမှာ အားကစားလုပ်ခြင်းက ဘာ့ကြောင့်အရေးကြီးသလဲ?